ithempulethi yohlelo lokusebenza lokuhlola
none Ukusebenza Isifanekiso soHlelo Lokuhlola Ukusebenza
Ithempulethi yohlelo lokuhlola ukusebenza engasetshenziswa njengoba injalo noma iguqulwe ukuze ihambisane nezidingo zephrojekthi yakho ngokuya ngezidingo zokusebenza.
Inhloso yalesi sigaba ukuhlinzeka ukubuka konke okuphezulu kwendlela yokuhlola ukusebenza okufanele ilandelwe iphrojekthi. Lokhu kufanele kwethulwe kubo bonke ababambiqhaza abafanele futhi kufanele kuxoxwe ngakho ukuze kutholakale ukuvumelana.
Njengengxenye yokulethwa kwe- , kuyadingeka ukuthi isixazululo sihlangabezane nenqubo yokwamukelwa, zombili ngokwezindawo ezisebenzayo nezingasebenzi. Inhloso yalo mbhalo ukuhlinzeka uhlaka lokuhlolwa okungasebenzi kwe- Isixazululo.
Lo mbhalo uhlanganisa okulandelayo:
Imigomo Yokungena Nokuphuma
Indlela yokuhlola ivolumu nokusebenza
Imisebenzi Yokuhlola Ukusebenza
3. Imigomo Yokungena
Izinto ezilandelayo zomsebenzi kufanele zigcwaliswe / kuvunyelwane ngazo ngaphambi kwesikhathi ukuze kuqhutshekwe nemisebenzi yangempela yokuhlolwa kokusebenza:
Idokhumenti yezimfuneko zokuhlola ezingasebenzi ezinikezwe i- , ngama-NFR anezinombolo lapho kungenzeka khona
Amacala abucayi okusetshenziswa kufanele ahlolwe ngokusebenza ngaphandle kwezimbungulu ezibucayi ezivelele
Imidwebo Yesakhiwo Yesakhiwo ivunyelwe futhi iyatholakala
Amacala okusetshenziswa abalulekile achaziwe futhi ahlinzekwa
Izinhlobo zokuhlolwa kokusebenza zivunyelwene
Layisha ukusetha ama-injectors
Noma ikuphi ukusethwa kwedatha kuyadingeka - isb. Inombolo efanelekile yabasebenzisi edalwe ku-
4. Phuma Kwinqubo
Umsebenzi wokuhlola ukusebenza uzophothulwa lapho:
Izinhloso zeNFR kuhlangatshezwane nazo nemiphumela yokuhlolwa kokusebenza yethulwe eqenjini futhi yamukelwa.
5. Izidingo Zemvelo
Ukuhlolwa kokusebenza kuzokwenziwa kuqhathaniswa nenguqulo ezinzile ye- Isixazululo (esesivele sidlulise izivivinyo ezisebenzayo) futhi senziwa endaweni ezinikele yokukhiqiza efana (pre-prod?) eyabelwe ukuhlolwa kokusebenza ngaphandle kokuthunyelwa kuleyo ndawo ngesikhathi sokuhlolwa kokusebenza.
5.1 Abafaka Umthwalo
Kuzoba khona eyodwa noma amaningi azinikezele 'ama-load injectors' aqala ukuqala umthwalo odingekayo wokuhlola ukusebenza. Isijobelelo somthwalo kungaba yi-VM noma ama-VM amaningi anesibonelo sokusebenza kwe-JMeter, kuqala izicelo.
5.2 Amathuluzi Wokuhlola
Amathuluzi okuhlola asetshenziselwe ukuhlolwa kweVolumu nokuSebenza azoba:
Ithuluzi lokuhlola umthwalo ovulekile. Kusetshenziselwe ikakhulukazi ukuhlolwa kwevolumu nokusebenza.
I-Splunk izosetshenziselwa ukungena ngemvume (Kungasebenzisa elinye ithuluzi - kudingeka uqinisekise nethimba lokuhlola i-perf).
6. Indlela Yokuhlola Umthamo Nokusebenza
I- Isixazululo kufanele sisebenze ngokwanele ukuphatha le mibandela elandelayo yomthwalo.
N.B. Izinombolo ezikuthebula elilandelayo ngezesampula kuphela - amanani wangempela kufanele afakwe uma sekuqediwe ngo- Idokhumenti yeNFR.
6.1 Amanani Wensizakalo Eqondisiwe
Okuqondiwe kwehora kutholakala kusixazululo samanje se- [Y2019]. Kusulwe amanye amanani ‘ayisibonelo’ kuthempulethi yohlelo.
Njengoba amanani aphakeme ngehora engekho phezulu, azothathwa njengokuqondiwe kokuhlolwa komthwalo ongaguquki. Isikali sokukala yi-TBD njengamanje.
6.2 Inani Labasebenzisi
Ukuhlolwa kokusebenza kuzosebenza ngabasebenzisi abangu-1000 [?] Abaphezulu. Abasebenzisi bazokwakhiwa ngo- ngaphambili futhi utholakale nge- I-Login API. Isicelo ngasinye sizongena ngemvume nge-userID ehlukile.
Ithuluzi le-JMeter lizosetshenziselwa ukwenza imibhalo yokuhlola ukusebenza. Ngaphakathi kwezikripthi, kuzoba nokuqinisekiswa okushiwo ukubheka amamethrikhi angenhla kanye nokuhlolwa kokusebenza okuyisisekelo ukuqinisekisa ukuthi izimpendulo ezifanele ziyatholwa ngesicelo ngasinye.
Amaphrofayli Wokulayisha we-6.4
Amaphrofayli wokulayisha kufanele aklanyelwe ukulingisa ithrafikhi yosuku emaphakathi ejwayelekile kuye indawo. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ithrafikhi yehlukaniswe kuphela futhi ikhawulelwe engxenyeni ye-Identity yeKhasimende kanye ne-Access Management yengxenye yesayithi, isb.
Ngezansi kwephrofayili yesibonelo yosuku:
Inkambo yokuqala yesenzo ukuthola isisekelo. Sisebenzisa umsebenzisi ongu-1 kuphela, sizoqalisa ukulingisa isikhathi esithile (isb. Amaminithi ama-5) ukuthola isilinganiso sezikhathi zokuphendula ngephoyinti ngalinye lokugcina. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ngomsebenzisi ongu-1 kuphela esikwazi ukufeza izicelo eziphakeme ngomzuzwana.
6.4.2 Ukuhlolwa Komthwalo
Ngemuva kokuqoqwa kwamamethrikhi ayisisekelo, khona-ke ukulingisa okufanayo, okulingisa iphrofayili yokulayisha, kwenziwa ngenani elikhulile labasebenzisi ukuhlola amavolumu aqondiwe. Umqondo walesi sivivinyo somthwalo ukuhlola uhlelo ngokuqhathaniswa nomthwalo wosuku ojwayelekile, ukulingisa ama-ramp-ups, iziqongo zosuku, nezindlela eziphansi.
6.4.3 Ukuhlolwa Kwengcindezi
Inhloso yokuhlolwa kwengcindezi ukuthola iphuzu lohlelo, okusho ukuthi uhlelo lungaphenduli ngasiphi isikhathi. Uma ukukala okuzenzakalelayo kukhona, ukuhlolwa kwengcindezi kuzoba yinkomba enhle lapho izikali zohlelo nezinsizakusebenza ezintsha zengezwa khona. Ukuhlolwa kwengcindezi, ukulingisa okufanayo okusetshenziselwa ukuhlolwa komthwalo kuyasetshenziswa kepha kunomthwalo ophakeme kunalindelekile.
6.4.4 Ukuhlolwa Kwespiki
Ukuhlolwa kwe-Spike kungenisa umthwalo obalulekile ohlelweni esikhathini esifushane. Inhloso yalolu vivinyo ukulingisa umcimbi wokuthengisa ngokwesibonelo, lapho inani elikhulu labasebenzisi ngasikhathi sinye lifinyelela i-akhawunti yabo ngesikhathi esifushane.
6.4.5 Ukuhlolwa Okumanzi
Ukuhlolwa kwe-soak kuzoqalisa ukuhlolwa komthwalo isikhathi eside. Inhloso ukuveza noma yikuphi ukuvuza kwenkumbulo nokungaphenduli noma amaphutha ngesikhathi sokuhlolwa kwe-soak. Ngokuvamile sisebenzisa u-80% womthwalo (osetshenziselwa ukuhlolwa komthwalo) ngamahora angama-24, kanye / noma u-60% womthwalo amahora angama-48.
6.4.6 Ukuhlolwa Kwendawo Yokugcwala
Ekuhlolweni kwephoyinti leSaturation silokhu sikhuphula umthwalo ngokuqinile ukunquma lapho uhlelo lungaphenduli khona, okusho ukuthola iphuzu lokwephuka kohlelo ngokomthwalo.
7. Imisebenzi yokuhlola ukusebenza
Le misebenzi elandelayo iphakanyiswa ukuthi yenzeke ngokulandelana, ukuqedela ukuhlolwa kokusebenza:
7.1 Ukwakhiwa Kwendawo Yokuhlola Ukusebenza
Ama-injectors wokulayisha kufanele abe namandla anele futhi kufanele aphathwe kude. Futhi, indawo okufakwa kuyo imijovo kufanele kuvunyelwane ngayo
Indlela yokuqapha nokuxwayisa yesikhathi sangempela kufanele ibe khona futhi kufanele ifake isicelo, amaseva kanye nezijobelelo zomthwalo.
Izingodo zohlelo lokusebenza kufanele zitholakale.
7.2 I-Use-Case Scripting
Ithuluzi lokuhlola ukusebenza elizosetshenziswa yiJMeter
Noma iziphi izidingo zedatha sekuxoxiswane ngazo ukuze amacala okusetshenziswa abhalwe phansi
7.3 Isakhiwo Sokuhlola
Uhlobo lohlolo oluzokwenziwa (Umthwalo / Ukucindezeleka njll)
Imodeli yokulayisha / imodeli yokulayisha kufanele kuvunyelwane ngayo yohlobo ngalunye lokuhlola (i-ramp-up / phansi, izinyathelo njll)
Faka isikhathi sokucabanga kuzimo
7.4 Ukwenziwa Kokuhlolwa Nokuhlaziywa
Ukuhlolwa okulandelayo kufanele kwenziwe ngale ndlela elandelayo:
Ukuhlolwa kwephoyinti lokugcwala
Ngokufanelekile, kuzokwenziwa ama-Test 2 ohlobo ngalunye lokuhlola. Ngemuva kokuhlolwa ngakunye kohlelo lokusebenza kungahle kulungiswe kahle ukuze kwandiswe ukusebenza kwalo bese kuqala omunye umjikelezo wokuhlola.
7.5 Ukuhlaziywa Kwangemuva Kokuhlolwa Nokubikwa
Thwebula uphinde wenze isipele sayo yonke imibiko yedatha efanelekile nokugcinwa kungobo yomlando.
Nquma impumelelo noma ukwehluleka ngokuqhathanisa imiphumela yokuhlolwa kokuqondiwe kokusebenza. Uma okuqondiwe kungafinyelelwanga kuzofanela kwenziwe izinguquko ezifanele bese kuqala omunye umjikelezo wokwenza ukuhlolwa. Akwaziwa ukuthi mingaki imijikelezo yokubulawa kwabantu ezodingeka ukuze kuhlangatshezwane nezinhloso okuvunyelwene ngazo.
Bhala futhi wethule imiphumela yokuhlolwa eqenjini.
ungaluvula kanjani uhlu oluningi
Iyini Indlela Yethimba Eliphelele Ekuhlolweni Kwe-Agile?
I-Docker yabaqalayo: Yini i-Docker nokuthi Ungayakha Kanjani Iziqukathi ze-Docker
Ukugunyazwa Kwezinga Lezinto Ezaphukile Ngezibonelo
Isu Lokuhlola kanye noHlelo Lokuhlola
Ukuhlolwa Kokuhlola ku-Agile
Ukuhlolwa Kwesoftware Nezinhlobo Zokucabanga Ezihlukile
Izinhlobo zePython Data kanye nokuguqulwa kohlobo